युगसम्बाद साप्ताहिक - यी नेता हुन्, जसले मतान्तरमा इतिहास रचे
Friday, 02.21.2020, 10:55am (GMT+5.5) Home Contact
यी नेता हुन्, जसले मतान्तरमा इतिहास रचे
Tuesday, 12.12.2017, 02:51pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । मंसिर १० र २१ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विभिन्न जिल्लाका उम्मेदवारहरुले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई निकै धेरै मत अन्तरले पराजित गरेका छन् । यसरी पराजित गर्नेहरु बामगठबन्धनका उम्मेदवारहरु रहेका छन् ।
हालसम्मको परिणाम अनुसार दोलखा र रुकुम पश्चिमका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धीभन्दा धेरै मतान्तरले विजयी भएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजयी भएर इतिहास कायम गर्ने उम्मेदवारमा दोलखाका पार्वत गुरुङ देखिनु भएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संयुक्त उम्मेदवार गुरुङले प्रतिस्पर्धीभन्दा ३० हजार १५३ मतले विजयी भएर रेकर्ड कायम गर्नुभएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी सबैभन्दा बढी मत पाउने उम्मेदवार बन्नुभएको छ । उहाँले ५७ हजारभन्दा बढी मत पाउनुभएको छ । मतान्तर भने उहाँको गुरुङकोभन्दा कम छ ।
झापा क्षेत्र नं.३ मा राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले नेपाली कांग्रेसमा तेस्रो धारतको नेतत्व गर्ने दावी गर्दै आउनुभएका कृष्ण सिटौलालाई १३ हजारभन्दा बढी मतान्तरले हराइदिनु सबैभन्दा आश्चर्यको नतिजा बनेको छ । २०६२।०६३ को आन्दोलनपछि राजसंस्थाको अन्त्य र धर्मनिरपेक्षताको प्रस्ताव सुटुक्क भित्र्याउने सिटौलालाई राजसंस्था हिन्दु राष्ट्रको नारा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका लिङदेनबाट पराजित हुनु आफैंमा चकित पार्ने पक्ष बनेको छ ।
यसभन्दा अगाडि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट गोरखा २ बाट उम्मेदवार बनेका डा बाबुराम भट्टराईले ल्याउनुभएको थियो ।
त्यस्तै प्रदेशसभा (क) मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता विशाल खड्काले २८ हजार ३५० मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् भने काँग्रेसका बर्मा लामाले १२ हजार ९५६ मत प्राप्त गरेका छन् । यो मतान्तर पनि प्रतिस्पर्धी भन्दा धेरै हो ।
रुकुमका जनताले आफूलाई पटकपटक धेरै मतान्तरले विजयी गराएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “पश्चिम रुकुममा जनताले सधैँ परिवर्तनकारी शक्तिलाई विश्वास गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि माओवादी केन्द्र र वाम गठन्धनलाई विश्वास गरे । जनताको यो विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ ।”
यसैगरी धादिङमा पनि वाम गठबन्धनका भूमि त्रिपाठीले ४९ हजार १२१ मतका साथ विजयी हुनु भएको छ । यो मतान्तर दोब्बर बढी हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका विश्वप्रसाद अर्यालले २१ हजार ९६८ मत ल्याउनुभएको छ । एक लाख १८ हजार १५० मतदाता रहेको क्षेत्र नं १ मा ७९ हजार ४२३ मत खसेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ अन्तर्गत प्रदेश (क)मा वाम गठबन्धनका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे २७ हजार ३३२ मतसहित विजयी हुनुभएको छ । उहाँ काग्रेसका मधुकुमार श्रेष्ठभन्दा १३ हजार ६८५ मत बढी ल्याएर विजयी हुनुभएको हो । पैंसठ्ठी हजार ४५८ मतदाता रहेको सो प्रदेशमा ४३ हजार ५६४ मत खसेको थियो । यसैगरी सो क्षेत्रको प्रदेशसभा(ख)मा वाम गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शालिकराम जम्मरकट्टेल २३ हजार ३८२ मतसहित विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी काँग्रेसका प्रभातकिरण सुवेदीले १० हजार ४०७ मत ल्याउनुभएको छ । बाउन्न हजार ६९२ मतदाता रहेको सो प्रदेशमा ३५ हजार ८५९ जनाले मतदान गरेका थिए ।
देउवाको यो जीतको के अर्थ ? (12.12.2017)
वाम बहुमतको सरकार बन्न नदिन ठूलै चलखेल (12.05.2017)
अस्थिरता मच्चाउने बाहिरी षड्यन्त्र ! (12.05.2017)
मौन अवधि, के गर्नु हुँदैन ? (12.05.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचन सकियो : अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा- लोकतन्त्रलाई ठूलो चुनौती (11.28.2017)
किन भयो कम मतदान ? (11.28.2017)
किन बजाए प्रकाशको मृत्युमा काखी (11.28.2017)